व्लग के हो, ए पैसा पनी कमाउन सकिन्छ ? Blog Tips | मेरो कलम
धेरै पैसा कमाउने रहर कसलाई हुँदैन ? व्यक्तिगत एवम पारिवारीक खर्च धान्न, सामाजिक गतिविधी एवम् हितका लागि जानकारी राख्नु व्यवस्थित तुल्याउनु हरेक व्यक्तिका कर्तव्य र उत्तरदायित्वहरु हुन्, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर यसो भन्दैमा सबैले यी क्षेत्रमा दक्षता हासील गरेका हुन्छन् अनि त्यसमा सफल हुन्छन् भन्न सकिन्न ।
तर खर्च टार्ने या सहयोग पु¥याउने सही माध्यम पत्ता लगाउन सके अनि धैर्यताका साथ मेहनत गरे अवस्य पनि सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव तथा मान्यता रहेको छ ।
तर पछि यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्दै गुगुल अग्रणी स्थानमा उभिन सफल भयो जुन आज पनि कायमै छ । अनलाइन विज्ञापन तथा सर्च इन्जिनका रुपमा प्रस्तुत गुगलले आफ्ना सेवा सुविधाहरु प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्यायो जसले सबैको मन जित्तै गयो अरुलाई पनि कमाउने आफू पनि कमाउने नीति अनुसार अगाडि बढ्दै गयो । जुन कुरा हामी www.blogger.com , www.blogspot.com, www.adsense.com , www.gmail.com तथा भिडियो साइट www.youtube.com बाट गर्न सक्छौ ।
Google Webmasters को विज्ञापन कार्यक्रम अन्तरगत Adword भनिने कार्यक्रमको संयुक्त रुप नै Adsense हो । भन्नाले Adword विज्ञापन नीति अन्तरगत विज्ञापनदाताहरुले दिएको विज्ञापनलाई प्रचारप्रसारको क्रममा विभिन्न इन्टरनेट माध्यमहरुबाट जनमानसमा पु¥याउने माध्यम हो । जसले वेवसाइट तथा ब्लग धनीहरुलाई Adsense बाट संकलित विज्ञापनहरु आफ्ना साइट तथा ब्लगहरुमा राख्ने अनुमति दिने कार्य गर्दछ ।
साराशंमा भन्नुपर्दा Google.com मा विज्ञापनदाताहरुले आफ्नो विज्ञापन विस्तार गर्न केही रकमहरु तिरिरहेका हुन्छन्, अनि जब विज्ञापन राखिएको साईट हेरिन्छ त्यतिबेला Google ले त्यो विज्ञापनका लागि विज्ञापनदाताहरुले तिरेको पुर्वनिर्धारित रकमबाट केही प्रतिशत अंश छुट्याएर तिर्ने गर्दछ पछि त्यो नै हाम्रो आम्दानी हुन्छ । ती Adword हरु कस्ता हुन्छन भन्ने जानकारी लिनका लागि कुनै पनि बेला Google.com मा कुनै पनि कुरा खोजी गरेर रिजल्ट पेजको दाहिने पटिको साइटमा हेर्न सक्नु हुन्छ । उदाहरणका लागि मैले यहाँ खोजी गरेको कुरालाई चित्रमा प्रस्तुत गरेको छ ।
यी भए Adword का कुराहरु । त्यसैगरी Adsense कार्यक्रम Adword भन्दा बिल्कुलै फरक कार्यक्रम हो जसले Adword विज्ञापनहरुलाई प्रचार प्रसार एवम् विस्तार गर्नका लागि तपाईं हामी जस्ता ब्लग तथा वेवसाइट संचालकहरुलाई ती आफ्ना साइट तथा ब्लगहरुमा प्रसारित गर्नका लागि अनुमति दिने काम गर्छ । अनि हाम्रो साइट तथा ब्लगहरुमा विज्ञापन राखिदिए वापत एडवर्ड ग्राहकहरुबाट गुगललाई तिरिएको रकमको केही रकम छुट्याउने गर्दछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा Adsense Publisher को हैसियतले तपाईंले गुगललाई ती Adword विज्ञापन प्रचारका लागि सहयोग पु¥याउनु हुन्छ ।
– त्यस पछि दोस्रो स्टेप देखा पर्छ ।
– त्यस पछि अब फारम भर्नु पर्ने छ । तलको चित्रमा मैले सजिलोको लागि नेपालीमा लेखिदिएको छु तर तपाइले भने अंग्रेजी मै लेख्नु पर्नेछ । फर्म भरीसके पछि Submit My application मा क्लिक गर्ने । अनि Google ले एडसेन्स approval e-mail नपठाएसम्म पर्खेर बस्नुस ।
कसरी र कहाँ कुन साइजको विज्ञापन राख्ने भन्ने कुरा तपाईले डिजाइन गरेको अर्थात् तपाईको साइटको डिजाइनमा भर पर्दछ । जो कोही पनि तपाईंको ब्लग तथा साइटमा विज्ञापन हेर्न भनेर पनि आएका हुदैनन । बरु हुन सक्छ तपाईको साइटमा भएका राम्रा र आकर्षक सामाग्रीहरुका कारणले त्यो मन पराइ आएका हुन्छन । त्यसैले यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो जुन विज्ञापन विज्ञापन जस्तो नदेखियोस, त्यो साइटको कुनै अर्को कन्टेन्ट जस्तो देखियोस । जसले क्लिक तथा पेजइम्प्रेशन पनि बढाउने काम गर्छ ।
– मेरो सल्लाह र परीक्षण अनुसार Search Ads नराख्नुस । यसबाट पैसा आउने चान्स कम्ती हुन्छ । त्यसैले यो प्रयोगको काम छैन ।–त्यसै गरी धेरै साइटहरुमा सबैले राख्ने गरेको अर्को चर्चित गुगुल विज्ञापन 468×60 px size हो जुन साइट तथा ब्लगमा राखेर केही फाइदा छैन । तपाइले पनि साइट तथा ब्लग हेडरको छेउछाउ यो विज्ञापन राख्नुभएको भए हटाइदिनु भए हुन्छ । यसमा एकदमै थोरै पैसा आउँछ । त्यसैले यो प्रयोग गर्नुको काम छैन ।
– अब हामीले खास प्रयोग गर्ने गुगल विज्ञापनको साइज भनेको 336×280 को हो जुन चै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी छ, यसमा बढी नै रकम पाइन्छ ।
– त्यसैगरी अर्को भनेको प्रभावकारी विज्ञापनहरुमा 300×250, 160×600 हुन् । तर 336×280 र 300×250 को विज्ञापनहरु प्रयोग गरे काफी हुनेछ ।
– गृहपृष्ठमा विज्ञापन राख्दा
only image and rich media ads राख्नुस । भित्री पेजमा only image and rich media ads नै राख्नुस । अनि 160×600 को विज्ञापन प्रयोग गर्दा साइडबार मेनुको तलतिर राख्ने र
– अब ती माथिका प्रभावकारी विज्ञापनहरुलाई अझै प्रभावकारी बनाउन हामी ले विभिन्न तरीकाहरु अपनाउन सक्छौ जसमध्ये टेबलको प्रयोग अझै प्रभावकारी हुनेछ । यो टेबल काठको नभइ कोड हो । जस्तैः
यहाँ राख्नुस adsense code 336×280
<table border=”0″ align=”right”><tr><td>
<table border=”0″ align=”center”><tr><td>
<table class=’nonpadded-table’ style=’border:1px solid #000000; background:#333333;padding:2px;text-align:center;’ width=’520′>
<div style=’align:center; margin:50px 90px 50px 90px’>
– त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको
High Paying Keyword प्रयोग गर्ने जसका लागि www.adwords.google.com मा जानुस र Keyword tools मा जानुस अनि तपाइले लेख्दै गरेको सामाग्री सम्बन्धी शब्दहरु खोज्ने जस्तै तपाइ अर्थ सम्बन्धी केही लेख सामाग्री तयार पार्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अर्थ सम्बन्धीका शब्दहरु खोज्नुस र ती सबै भन्दा बढी तिरिने शब्दहरु छानेर आफ्नो सामाग्रीमा पनि मिक्स गर्ने र सामाग्रीको टाइटलमा पनि राख्ने यसो गर्दा ती Keyword सम्बन्धी विज्ञापनहरु देखिन जान्छ र पैसा पनि बढी नै आउँछ ।
– अहिलेलाई माथि उल्लेखित कुराहरु नै काफी छन् प्रयोग गरेर हेर्नुस । एकाउन्ट खोलेर अल्छी भएर बसेमा अवश्य पनि हुनेवाला केही छैन । विज्ञापन राख्दैमा पैसा आइहाल्छ भनेर बस्नु गलत हो । त्यसैले समय तालिका अनुसार गतिशील बन्नुस, एडसेन्सले तपाईलाई दोब्बर तलब दिनेछ, ।
– त्यसै गरी एकाउन्ट जोगाउनु अर्को चुनौती हो । जसलाई जोगाउनका लागि अघि माथि एकाउन्ट खोल्दा ५ कुरामा सम्झौता गर्नु भएको छ त्यहाँ हेर्नु त्यही अनुसार अघि बढ्नुस ।
MILAN79266 April 12, 2013 Log in to Reply
Helpful tips for bloggers thanks Mr SB Gautam.
SB Gautam April 12, 2013 Log in to Reply
You are Welcome Milan sir 🙂
Smooth Heart April 12, 2013 Log in to Reply
वा वा क्या सहि लेख छ ! तर म संग नेपाली समाचार वाला साइट छ त्यसलाई कसरि एड्सेंस लिने होला कृपया झर्को नमानी बताउनु होला !
Shanti Bikram Gautam April 12, 2013 Log in to Reply
Smooth Heart जी , नेपाली भाषामा गुगल एड्सेन्स एप्रुभ गर्न गाह्रो छ । गुगलले नेपाली भाषालाई भेरिफाई गरेको छैन । अग्रेजी वा गुगलले भेरिफाई गरेको भाषामा व्लगिङ गर्नुहोला । र लेखमा भनिएजस्तै निश्चित समयपछि एड्सेन्सको लागी रिक्वेष्ट गर्नुभयो भने एप्रुभ हुनसक्ने सम्भावना वढी नै हुन्छ । एड्सेन्स एप्रुभ भएपछि त नेपाली युनिकोण टेक्स्टमा पनी एड्सेन्स राख्न सकिहाल्छौ । अर्को महत्वपुर्ण विषय मैले तपाईको साईट हेरे । त्यहाँ धेरै कपिपेष्ट कन्टेन्ट छ । कृपया कपिपेष्ट नगर्नुहोला । आफ्नै सृजना राख्नुभएका खण्डमा मात्र स्वस्थ्य साईट हुनसक्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । जिज्ञासाको लागी धन्यवाद ।
siddi gurung April 14, 2013 Log in to Reply
thank u s.b. sir mitho ani upayogi lekh ko lagi
sarai ramro lekh chha yo atyantai upayogi hunechha ma jasta naya blog banauna chhahane haruko lagi !
Ramnath Ghale April 17, 2013 Log in to Reply
verry ggod s.b.gautam
SB Gautam April 30, 2013 Log in to Reply
santosh tamang April 30, 2013 Log in to Reply
धन्यबाद हजुर ले लेख्नु भएको जुन कुरा छ तेस्मा हामी बेरोग गार साथी हजुर लाइ फाइदा जनक छ किन कि हजुर ले आफ्नो बेस्तता को कारण पनि येतिका टाइम दिएर हामी लाइ सुझाब दिनु भएको छ मैले पनि केहि दिन मा google aedsan राख्ने बालामा थिए हजुर यो पोस्ट ले झनै खुसीको कुरा पोस्ट गरि दिनु भयो आसा छ तपाइले भनेको जस्तो राख्न सकिन भने तपैले केहि हेल्प गर्नु हुनेछ भन्ने धन्यबाद
Shanti Bikram Gautam April 30, 2013 Log in to Reply
प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
Prakash May 5, 2013 Log in to Reply
उपयोगि लेख को लागि धेरै धेरै धन्याबद !
मेरो site यस्तो http://www.raiprakash.com.np छ । के यसमा google addsan राख्न सकिन्छ । मैले यसको लागि के के गर्नु पर्छ होला ।
थप जानकारि पाए आभारि हुने थिए ।
Shanti Bikram Gautam May 5, 2013 Log in to Reply
Prakash ji , नेपाली भाषालाई गुगलले भेरिफाई गरेको छैन,अग्रेजी वा गुगलले भेरिफाई गरेको भाषाको साईटवाट एड्सेन्स एप्रुभ गर्न सकिन्छ । एप्रुभ भईसकेपछि भने तपाईले नेपाली युनिकोडको साईटमा पनी एड्सेन्स राख्न सक्नुहुन्छ ।
narayan silwal June 18, 2013 Log in to Reply
मेरो ब्लगमा गुगल याड राख्नै जानीन
रेडियो विहानी June 18, 2013 Log in to Reply
SAMABESI June 18, 2013 Log in to Reply
मेरो ब्लगमा गुगल याड राख्नै जानीन http://www.samabesionline.com
Shanti Bikram Gautam June 19, 2013 Log in to Reply
तपाईहरुले दिनुभएको लिकंको व्लग नेपाली भाषामा छ । नेपाली भाषामा गुगल एड् एप्रुभ गर्न सकिदैन । भन्नुहोला अरु नेपाली साईटमा एड् देखिन्छ त ? उनीहरुले अग्रेंजीमा एप्रुभ गरेर मात्रै नेपाली साईडहरुमा कोडलाई तोडमोड गर्दै राखेका हुन् । त्यो पनी फियरली छैन । नेपाली भाषामा राखिएको एड्सेन्स जुनसुकै समयमा हड्न सक्छ । अग्रेंजी एवं गुगलले भेरिफाई गरेको अन्य भाषामा व्लग रन गर्नुभयो भने मात्र गुगल एड् पाउन र कमाई गर्न सक्नुहुन्छ । प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा धन्यवाद । 🙂
Jo August 7, 2016 Log in to Reply
धेरै राम्रो मा यसकै बारेमा अध्ययन गर्दै थिए तर भाषा नाबुजेर सकेको थिएन यहाँ नेपाली भाषामा नै भएकोले धेरै सजिलो भयो .. धन्यवाद